दलान नेपाल : किन गच्छदार मोर्चा बनाउन सक्दैन्न ?
सुरुमा त गच्छदारको उक्त प्रयास नै प्रतिसोध्ताम्क थियो । निर्वाचनमा आफु मधेशी पार्टीहरुमध्ये सबै भन्दा ठुलो भए पनि तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना विचको एकिकरणले आफु पछि पर्ने देखे पछि गच्छदार आत्तिएका थिए । उता समानुपातिक नामावली छनौटको क्रममा गच्छदारलाई भारतीय पक्षसंग परेको ठकरावको पिडा छदै थियो । त्यही भएर उनले शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्र यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवलाई काखी च्याप्ने प्रयास प्रारम्भ गरे । केही बैठकहरु गरे पनि आजको मितीमा उनी मोर्चा बनाउन त पार्टीलाई लामो समय सम्म एक पनि राख्ने अवस्थामा छैन ।
उनले मोर्चा बनाउने भनेको राजकिशोर यादव, अनिल झा र शरदसिंह भण्डारी आफै तमलोपाको पार्टी कार्यलयमै पुगेर महन्थ ठाकुरसंग विलय हुन तयार रहेको जानकारी गराईसकेका छन भने महेन्द्र यादव सम्पर्क व्यक्तिको मार्फत कुराकानी गरिरहेका छन । ठाकुरले यीनीहरुलाई तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना विच एकिकरण घोषणा सम्म पर्खन वचन दिएका छन । यी एकिकरणको घोषणा लगत्तै यादव, भण्डारी र झाको पार्टी प्रवेश कार्यक्रम तय हुनेछ । गच्छदारले तीनलाई ब्रेक गरेर आफुतिर ल्याउन जतीसुकै प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुने कुनै छाटकाट छैन । तीन पार्टीको प्रस्तावित एकिकरणको खाकामा वरिष्ठ नेताहरुको समुह नै बनाउने प्रस्ताव त्यही मनसायका साथ राखिएको छ ।
गच्छदार किन एक्लै ?
महन्थ ठाकुरले तमलोपा घोषण गर्ने वेलामै ठाकुर संगै गच्छदार पनि आउने चर्चा थियो । तर गच्छदारले ठाकुरको नेतृत्व स्विकार्न तयार भएनन । वरु जेपी गुप्तालाई लिएर फोरम नेपाल तिर होमिए । जाहा उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमको वरिष्ठ नेताको रुपमा विरजमान भए । सताको खेलमा माहिर मानिने गच्छदार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव र जेपी गुप्ता संगै भौतिक योजना मन्त्री बन्न सफल भए ।
सताका कच्चा खेलाडी उपेन्द्र यादवलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन संगै उनले साथ छोडेर माधव नेपालको सरकारमा फेरी मन्त्री बन्न भ्याए । जसका लागी उनले फोरम नेपाललाई विभाजन समेत गराए । तत्कालिन अवस्थामा फोरम नेपालको उक्त विभाजनमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समेत रहेको मधेशी मोर्चाको खुल्ला समर्थन थियो । तर आज तिनै ठाकुर र महतो गच्छदारलाइ वाईपास गरेर यादवलाई प्राथमिकतामा रोजेका छन भने गच्छदार भौतारिरहेका छन ।
फोरम नेपाललाई विभाजन गराएर फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बनेका गच्छदारलाई ठाकुर र महतोले उपेन्द्र यादवलाई माईनस गरेरै मोर्चामा वडो उल्लासका साथ भित्रियाएका थिए । तर केही समय नबित्दै मोर्चाको स्वघोषीत संयोजकको रुपमा गच्दारले आफुलाई प्रचारवाजी मात्रै होईन कि स्थापित नै गरे । जबकी मोर्चा अहिले सम्मको कुनै पनि बैठकले गच्छदारलाई संयोजक वा प्रमुखको जिम्मेवारी नै दिएका थिएन । भर्खरै सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको केही महिना पुर्व तमलोपाको पार्टी कार्यलयमा ठाकुरको लामो प्रयास पछि बसेको मधेशी मोर्चाको बैठकमा अरु मधेशी नेताहरुले गच्दारलाई तपाईलाई कसले मोर्चाको संयोजक बनायो भनेर कडा प्रश्न पनि तेर्साएका थिए । जवाफमा उनले आफुले कहिल्यै पनि आफैले संयोजक नभनेको खाली मिडियाले त्यतीकै हावाको तालमा लेखिरहेको जवाफ दिएका थिए । त्यही बैठक मोर्चाको अन्तिम बैठक हुन पुग्यो । यसरी ठाकुर र महतो प्रति एक्कासी हावी हुनु र लैनचौर संगको बदलीएको सम्बन्ध नै गच्छदारका लागी आज प्रत्युपादक बन्न पुगेको छ ।